ကျမရဲ့နေရာလေး: August 2013
အော်..အပေါ်ထပ်တက်တာက၊ကျမရဲ့ မပြီးဆုံးနိုင်သေးသောအိမ်ဆောက်ခြင်းရဲ့ အဆက်လေးပါရှင်။
တကယ်ဘဲ..မြို့ လေးမှာလည်း ခဏခဏရပ်ရပါတယ်။ အိမ်အကြမ်းထည်ပြီးသွားတော့ သဲနုဆိုတာနဲ့ ၊ အိမ်ကိုပြန်ချောရတယ်ဆိုလား..။အဲဒီသဲနုမရလို့ (မိုးမရွှာလို့ တဲ့)ကုန်ကြမ်းပြတ်လတ်လို့ ဆိုပြီး ၁ဝရက်
လောက်နားရပါသေးတယ်။ ကုန်ကြမ်းတွေအားလုံးက အုတ်၊သဲ၊ဝါးလုံး၊သစ်ကလွဲလို့ ကျန်တာပုဆိန်ရိုး
မဟုတ်ပေမဲ့ ပြည်ပအားကိုး ကြရပါတယ်။ ဟင်းဟင်း..ဒီလိုအားကိုးလာတာလည်း မယ်မီးတသက်ရှိလေ ပြီပေါ့ရှင်..။
ကျမက ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ တွက်ချက်ပြီး တခြမ်းစီကပ်ခိုင်းပါတယ်။တပြိုင်နက်အားလုံးသစ်ဘောင်တွေ
တွက်ရေးကအန်မတန်မှ ချက်ချာတော့ ကန်ထရိုက် တာလည်း မျက်လုံးကြီးပြူးကြည့် မယ်မီးပြောသလို လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်။ သစ်တတန်ကို ဘယ်လောက်ရှိလဲ..သိကြတဲ့အတိုင်းဘဲ..။သစ် ၃ တန်ဖိုးလောက်
ဝါးလုံးတွေတော့အများကြီးဝယ်ရတယ်။သူ့ ဆီဝါးလုံးတွေဝယ်ရင်းစကားတွေပြောလို့ ရင်းနှီးသွားတယ်။
ချည်ထောက်ဖုတ်ဖို့ လာပေးတယ်။ကောက်လှင်းဆန်ပါတခါထဲပေးပါလို့ ထပ်တောင်းလိုက်တယ်..အဟဲ။
အစက သူတို့ လုပ်ထားတဲ့လှေခါးပေါ်မတက်ရဲဘူး...။နောက်မှအားတင်းပြီးတက်ရတာ...။
လှေခါးဆိုတာအိမ်ရဲ့ အသက်ဘဲတဲ့။လှေခါးလုပ်ဖို့ ရက်ကောင်းရွှေးရပါတယ်။လှေခါးဘိလပ်မြေ၊လောင်း
ဖက်)တို့ ပေါ့..နောက်ရတနာတွေ ငွေဒင်္ဂါးဟောင်းတွေထဲ့ခိုင်းပါတယ်။ ကိုယ်တို့ လည်းမူးလို့ရူစရာတောင်မ ရှိတော့ ရှေးခေတ်က ဆယ်ပြားစေ့အလေးတွေကိုထဲ့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ တသိုက် ကျုပ်မယ်
အိမ်အုတ်မြစ်ချဖို့ တူးတုံးကတွေ့ လာတဲ့အိုးဟောင်းတွေ၊အဲဒီမြေအိုးဟောင်းလေးမှာမီးရှို့ စပါးခွံမည်းမည်းအ
ပြည့်ပါတယ်။အဲဓါတ်ပုံပြန်ရှာတာမတွေ့ လို့ ..။
နောက်ပြီး ဒီရွှံရုပ်လေးတွေ့ တယ်။အရင်ကစော်ဘွားဟော်နန်းတခုရဲ့ တံခါးပေါက်နေရာဆိုတော့၊အစောင့်
တွေဘာတွေစီမံထားတာလားမသိပါဘူးလေ..မျှော်တာကတော့ ရွှေအိုးပေါ့ရှင်...ဟီး :P
အမေကအားလုံးသွားစွန့် ပြစ်ခိုင်းပါတယ်..။အမှတ်တရသိမ်းထားမယ်ဆိုလည်းမရဘူး.. :((
နောက်အထပ်သားပြားတွေအထူကြီးမှအထူကြီးဗျို့ ၊အများကြီးမှာရတယ်။ ဒီလို လေးခင်းပြီးဆေးသုတ်၊
ကျမတို့ မြို့ ကလျှပ်စစ်မီးဆိုတာ လူတွေနဲ့ မတည့်ဘူးလားမသိပါဘူး။လာတဲ့ရက်ကနည်းတယ်။မီးလာတာ
မြင်လို့ ရှိရင်တောင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကိုဖြစ်လို့ ။ထူးဆန်းနေတာလေ..။ထမင်းအိုးထတည်ကြည့်၊ထမင်းမ
ကျက်ခင် တာတာပြီးသွားလိုက်မယ်။ ဒီတော့မြို့ လေးကအိမ်တွေဆောက်ရင်ခပ်မြင့်မြင့် လေဝင်လေထွက်
ပုံမှန်ဆိုရင် ၁၃ ပေအမြင့်ဆောက်ကြတယ်။ဒီတော့ မယ်မီးလည်း ၁၃ပေ ပေါ့။ ၁၅ပေလုပ်ပြီး ထပ်ခိုးသဘော
တနေ့ နေ့ ဓါတ်ဆီဖိုးမနည်းကုန်တယ်။ မိုးလင်းကနေမိုးချုပ် စက်သံနဲ့ နားလည်းအူနေတာဘဲ။ လူတောင်
ကိုင်း..အပေါ်ထပ်ကိုလောင်းတဲ့နေ့ ကပေါ့။ရှေ့ မှာရှုပ်နေတာနဲ့ ကြောက်တဲ့သစ်သားလှေခါးပေါ်တက်ပြီး
သူတို့ ကိုတနေ့ လုံးကျွေးတယ်။သနားစရာကောင်းပါတယ်။အရမ်းပင်ပမ်းတာဘဲ။ အဆင့်ဆင့်အပေါ်တင်ရ တာလေ..။
မီးစက်ကိုပိတ်ဖို့ အော်တဲ့သူ၊ရေစက်ဖွင့်ဖို့ အော်တဲ့သူ၊သဲတွေထပ်မှာဖို့ အော်တဲ့သူ.ဟူး...အသေအော်ကြတာ။
ကရေတွေသူ့ အိမ်ဖက်ကိုစီးလာလို့ ဘာလိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးလာတိုင်ပါတယ်..။တကယ်ပါ မောနေရတဲ့
အထဲမုဒိသာမပွားနိုင်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ အကုသိုလ်တွေတပုံကြီး ပြောမိဆိုမိပါတယ်...ဟူး....:((
ည ဂနာရီအထိလုပ်ကြတယ်..နေ့ လည်အစာပြေမုန့် တွေကျွေး၊ညနေ ၆နာရီမှာပဲနို့ ရည်နဲအစာသွပ်ပေါင်
မုန့် တယောက်တလုံးဆီလိုက်ဝေပြီး...ပြန်ခါနီးမှနောက်ဆုံးဘီယာ၃ဖာလောက် သူတို့ တော်လဂျီပေါ်တင်
ပေးလိုက်ပါတယ်။(ကောင်းမှု့ ကုသိုလ်တွေလေ... :))
သူတို့ ဘိလပ်မြေအိတ်ခွံနဲ့ ပြန်ပြီး သဲသယ်ကြပါတယ်။အုတ်တွေကျတော့ပစ်တင်ကြတာ၊ခဏခဏလက်
ချော်ပြီးပြန်ကျရင်ကွဲသွားတယ်။တခုကွဲရင် တခါကျမအော်ပါတယ်...။ တလုံး ၅၅ ကျပ်လေ၊တခါလေ ၆ဝ အထိပေးရတယ်။ကောင်လေးထိုင်နေတဲ့ပီပါက တလုံး ၃၅ဝဝဝ...အပေါက်ပြန်ဖေါက်ခက တလုံး၁ဝဝဝ...
၃လုံးဝယ်ရတယ်။ကျမ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ သဘောင်္ဆေးကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သုတ်တာ၊ဆံပင်တခုလုံးသဘောင်္
ဆေးနဲ့ ညားပြီးမာနီတောင်သွားလေရဲ့ ..:P
ပြန်လာခါနီးအချိန်အထိတော့ အပေါ်ထပ်အခန်းကန့် ထားပြီးပြီ..။
အပေါ်ထပ်ကိုဘိလပ်မြေလောင်းတဲ့နေ့ က မယ်မီးပြေးလွှားနေရတာ၊အရမ်းမောတာဘဲ၊ဘာမှမစားရသေး
ခေါက်ဆွဲမီးခိုးတလူလူကြားထဲကတွေ့ ရတဲ့အိမ်က မယ်မီးတို့ အိမ်ပေါ့...။
သူ့ဝက်သားလုံးကြည့်ရတာကိုယ်တိုင်လုပ်ပုံမရပါဘူး၊ ထိုင်းဖက်ကလာတာမဟုတ်ရင်ပြီးတာဘဲ...။
ခေါက်ဆွဲတပွဲကို ၁ဝဝဝကျပ်တဲ့...တန်မှတန်..ရန်ကုန်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်နော်...။ ရန်ကုန်မှာဈေးတွေခေါင်ခိုက်နေ တာဘဲတဲ့..။
သူ့ ထိပ်ဝကိုပိတ်ဖို့ လိုက်ရှာတာရွှာလည်တယ်။နောက်ဆုံးဖက်ရွှက်တွေနဲ့ လိပ်ပြီးပိတ်ရတယ်။
အိမ်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ တစုထဲဖတ်ချင်ကြည့်ချင်ရင်...
Posted by မီးမီးငယ် at 11:18 PM 14 comments Links to this post
Posted by မီးမီးငယ် at 6:56 PM 14 comments Links to this post
နှစ် ၅ဝ ပြည့်ရင်ရွှေရတုသဘင်တဲ့.......
မနက်စောစော အီးမေးစစ်ဖို့ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူက ကိတ်တွေဘာတွေနဲ့ ...။
အရင်ကတဲကစဉ်းစားထားတယ်...ဒီနေ့ ပြီးရင်ဘလော့ကိုရပ်နားလိုက်မယ်..လို့ ..။
အိုကြီးအိုမ..နဲ့ ခလေးတွေလူငယ်တွေကြားထဲမှာ မကောင်းပါဘူးလေ..။
အာခါတွင်းတွေ့ သွားပြီးဆက်ခါဆက်ခါ ရေးနေ လေပေါနေ လိုက်တာ...။
ပေါက်ကရတွေရှောက်ရေးတတ်လို့ တချို့ ကထင်နေတာ လူငယ်အရွယ်လေး...တဲ့..။
အဟား.... မယ်ငီး အသက် ၅ဝ နှစ်တိတိရှိပါပြီ...။ မယုံဘူးလား... ^-^
အရွယ်တင်လိုက်တာနော် လို့ ဘဲအမြဲအပြောခံရတာ(ကြုံတုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်အုံးမှ :))
မိတ်ကပ် နှုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ မသုံးတတ်ဘူးလေ...။ အဖေ့စကားနားထောင်တာ..။
(အဖေကပြောတယ်အဲဟာတွေလိမ်းထားရင်အခြောက်နဲ့ တူတယ်တဲ့..ဟွန့်@-@ )
အချို၊နဲ့ ဆီ ဆိုရင် မပါသလောက်ဘဲ...။ပဲကိုအဓိကထားစားတာ(လူလည်းပဲများတာလေ..:P )
အဲဒါကြောင့်လို့ ထင်တာဘဲ... (ထောက်ခံလိုက်ပါရှင်)
ဒီနေ့ မှာ အဖေနဲ့ အကို ၂ယောက်ကိုအထူးသတိရတယ်...။
ငယ်ငယ်ကတဲက စိတ်ဆင်းရဲစရာခေါင်းထဲမှာ သိပ်မထဲ့တတ်ဘူး..။
ချော်လှဲရင်တောင် အော်ရီတတ်တဲ့ လူတန်းစားထဲကပါ..။
အူကြောင်ကျားအတွေ့ အကြုံတွေကိုပြောပြရင် အဖေနဲ့ အကို ၂ယောက်ကဒိုင်ခံ ရီပေးတတ်တယ်။
အဖေနဲ့ အကိုတွေ ဆုံးရှုံးသွားတော့ တော်တော်တုန်လှုပ်မိတယ်။
သွားဖို့ ဘာအဆင်သင့်တွေပြင်ထားပြီးပြီလဲ လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုပြန်မေးမိတယ်။
နေပျော်အောင်နေတတ်ခဲ့သလို သေပျော်အောင်လုပ်ဖို့ လည်းလိုသေးတယ်လေ..။
ကိုယ့်အတိတ်ကာလက ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ အားလုံး လိပ်ပြာသန့် ခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးရှင်မိဘ ၂ပါးကိုဘယ်တော့မှ စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး..။
ဒါတွေနဲ့ ဘဲ သံသာရာခရီးသွားဖို့ မလုံလောက်သေးဘူးလေ..။
အများကြီးလုပ်ဖို့ အားထုတ်ဖို့ လိုသေးတယ်..။
လူမှန်းသိတတ်စအရွယ်ကတဲက ဒီနေ့ အထိပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါနကုသိုလ်၊
ဒီနေ့ အတွက်ရည်စူးပြီးပြုခဲ့တဲ့ ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အားလုံးကိုမိဘ၂ပါးနဲ့ တကွဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟ
များ ကျမရဲ့ စာဖတ်မိတ်ဆွေများ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာ၊ မုန်းသူ၊ချစ်သူ၊ခင်မင်သူ၊ ခဏ တဖြုတ်ကြုံဖူးသူ၊ အွန်လိုင်းမှသိဖွယ်ရာများ၊ ချက်ပြုတ်နည်း ပညာများဝေငှသူ အားလုံးကိုရည်စူးပြီး အမျှကုသိုလ်ပေးဝေ လိုက်ပါတယ်...။
မျက်နှာတည့်တည့်ထားရင်ကွယ်နေလို့ နေရာပေါင်းစုံရွှေ့ ပြီး
အသက်ကြီးလာသလို နှလုံးသားရောဦးနှောက်ရော လိုက်ကြီးဖို့ ကြိုးစားရင်း...၊ စိတ်ကအခုထိ အရွယ် မရောက်သေးပါ...။
Posted by မီးမီးငယ် at 12:00 AM 25 comments Links to this post
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံဖူးကြမှာပါ။တယောက်နဲ့ တယောက်အကြိုက်ခြင်းမတူကြတော့ လွှင့်သမျှ အစီအစဉ်
တွေကိုလည်းကိုယ်အကြိုက်သူ့ အကြိုက်လုရွှေးရသေးတယ်လေ..။ရန်ကုန်မှာနေတုံးက ကျမတခါမှတီဗီရှေ့၁ဝမိနစ်ပြည့်အောင်တောင် မနေဖူးခဲ့ပါဘူး။ စလောင်းတခုလောက်တပ်ထားပေးလိုက်တာနဲ့ အိမ်သားတွေ ညည နောင်ကျိန်နေကြတာ တကယ်စိတ်ပိန်တယ်။တူလေးက ကာတွန်း ၊အမေက ထိုင်းအခန်းဆက် ဇာတ် လမ်းတွဲ၊ အဖေက ဂေါက်ရိုက်တာ၊ အိမ်ကကောင်မလေးက ကိုးရီးယားကား...၊ကျမကတော့ တခါခါထိုင်းက လာတဲ့ ခရီးသွားအစီအစဉ် ကိုကြိုက် တာ (အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့သူကခရီးသွားရင်းသူရောက်တဲ့ဒေသရဲ့အစားအစာတွေကိုပါပြတာလေ)။ ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဖက်ကမဲမ သာတော့ ခဏဘဲကြည့်ရတာပါ..။ခုလည်း လူ၂ယောက်ထဲနေရတာ၊သူ့ နဲ့ လုနေရတယ်။ နေ့ လည်ခင်းအားချိန်ကြတော့လည်း ဟိုလုပ်ဒီ လုပ်နဲ့ တီဗီ
ရှေ့ မရောက်ဖြစ်၊ ဒီတော့ သူကနေ့ လည်ကြိုက်တာကြည့် ညကျသူ ကြိုက်တဲ့လက်ဝှေ့ ကြည့် မယ်တဲ့..။ ကဲ...နေ့ လည်ဆိုကျမ အသေအချာထိုင်ကြည့်နေရပြီလေ..။
ကျတယ်..။ဗမာပြည်မှာနေတုံးက တီဗီစပေါ် ခင်ကာလလောက်မှာဘဲထင်တယ်..Yan can cook ဆိုတာကို စကြည့်ဖူးတယ်လေ..။ မစ္စတာ ယန်ကြီး သူ့ ဓါးနဲ့ စဉ်းနီတုံးကိုအားပါးတရခုတ်ပြီးဓါးကိုတင်လိုက်တာလေ..
မျက်စိထဲကတကယ် ထွက်ကိုမထွက်ဘူး။တကယ်မိုက်တယ်။ချက်တာ လည်းလွယ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ ထိုင်းရောက်တော့ဟင်းချက်တဲ့အစီအစဉ်တွေတခုမှမလွတ်ဘူး..ရသလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဟင်းချက်တဲ့
အစီအစဉ်ထဲမှာမှ ကျမကခရီးထွက်ရင်း ရောက်တဲ့နေရာမှာ ဒေသခံတွေ ဆိုင်တွေ ချက်တာပြုတ်တာပြတဲ့ အဲ့ဒီလိုအစီစဉ်ကို ပို ကြိုက်လာတယ်..။ခုတော့ နံမည်တွေတောင်မေ့နေပါပြီ။ချယ်နယ် နံပါတ် ၃/ ၅ လို့ ထင် တာဘဲ။နေ့ လည်အချိန်လောက်လာတတ်တယ်။(ဟင်းချက်တာတွေကြည့်တတ်တာတခုပါဘဲ ဟင်းချက် လည်းညံ့ချက်တော့ ^_^ )
တမျိုးထဲကိုဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲဆိုတာတွေ၊ ကားနဲ့ အစားအစာတွေလိုက်ရောင်းတဲ့လူတွေချက်တာ
အိုး..အများကြီးမှအများကြီး ပြောမကုန်နိုင်ဘူး..။ဂျာမဏီ၊နယ်သာလန်၊အင်္ဂလန်က ဟင်းချက်တဲ့ သူတွေ အကြောင်း. .နောက်ကြုံရင် နဲနဲအားလူးဖုတ်ပေးအုံးမယ်လေ...။ခုတော့ကျမကြည့်တဲ့ foodnetwork က
အစီအစဉ်တခုအကြောင်းကိုပြောပြ မယ်နော်...။ အဲဒီထဲမှာမှ ကားမောင်းရင်း သူက(အဓိကကတော့ အမေ
ရိကားထဲမှာပါဘဲ) သူတို့ ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်( မူရင်း အမေရိကန်တွေစားတဲ့ဆိုင်) တွေကိုလိုက်ပြီးစား
သောက်၊ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာအထိ ဝင်ပြီးဘယ်လိုချက်သလဲသွားရိုက်ပြီးပြတာပါ..။Diners,Drive-Ins and Dives တဲ့ ။ အမေရိကားရုပ်ရှင်တွေမှာမြင်ဖူးကြမှာပါ ။ စတီးရောင်တွေနဲ့ဘစ်ကားလိုလိုရှည်မျော်မျော်ကြီး Diner လို့ ရေးထားတတ်တဲ့စားသောက်တိုင်တွေလေ..။
နဂိုမူလကတော့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ သူတို့ မနက်နေ့ လည် ညစာတွေကိုလိုက်ရောင်းတဲ့စားသောက် ဆိုင်မော်တော်ယာဉ်တွေပါတဲ့။ တချိန်ကသူတို့ လူမျိုးတွေရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆိုင်တွေပေါ့...။
နောက်ပိုင်း ကာလတွေပြောင်းခေတ်တွေပြောင်းလဲလာပေမဲ့တချို့ ဆိုင်တွေက အရင်တုံးကပုံစံကိုဘဲ
မနက်စာ ban cake ကနေ နေ့ လည်စာ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ညစာအသားပြားကင်ကြော်တွေအထိ တနေကုန် ရတယ်။မနက်ကနေညအထိရောင်းတယ်လေ..
တချို့ ကလည်းနဲနဲပါးပါးဘဲပြန်လည်ပြုပြင်ထားကြတယ်။ အထဲမှာတော့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ..။
ဆိုင်ပုံစံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို သူတို့ ဒေသအလိုက် (ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေက များသောအားဖြင့် စုနေထိုင်ကြတာကိုး..ဥပမာဂျာမာန်တွေများတဲ့နေရာဆိုဂျာမာန်အစားအစား နဲနဲပုံစံ
ပြောင်းထားတဲ့ Diner) စားသောက်ပုံစံအလိုက် အမျိုးမျိုးရောင်းတာ ကပိုစိတ်ဝင်စားစရာ။ အမေရိကား မှာနေထိုင်ကြတာလည်း တကမ္ဘာလုံးကလူမျိုးပေါင်းစုံလေ..။
မသိပါဘူး..။အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့လူက Guy Fieri တဲ့ မျက်မှန်ကြီးကို နဖူးမှာပြောင်းပြန်တပ် ထားတတ် တယ်။သူ့ စတိုင်နေမှာ..:) ဒီအစီအစဉ်မှာသူချက်တာမရှိပါဘူး..သူများတွေချက်တာကြည့်မေးမြန်းစပ်စု
အားပါးတရ ပါးစပ်ထဲထည့်..ကိုယ်တို့ က ပါးစပ်လေးဟောင်းလောင်းနဲ့ ငေး...ဒါပါဘဲ...။
အဲဒီမှာသူတို့ ချက်တဲ့ ဟမ်ဘာဂါ တို့ ဆိုတာ အတူတူလို့ ထင်ပေမဲ့၊နဲနဲဆီကွဲတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းတွေနဲ့ 
လေ..။ကျမတွေ့ တာတော့ အသားတုံးကြီး အမဲသား၊ဝက်သား..တခုခုကို ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ ဆား အားလုံး နီးပါးအမှုန့် ဘဲသုံးကြတယ်၊ ပြီးသူတို့ ရဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ...အမယ်ပေါင်းဆယ်မျိုးထက်မနည်း
သိမ်းကြုံးထဲ့လိုက်တာဘဲ။ နောက် နာရီများစွာ၊တချို့ လည်းညသိပ်ထားကြတယ်။ တချို့ ကရေထဲ မှာထဲ့စိမ် တယ်။နောက်မှ ဖုတ်မယ်၊ကင်တယ်၊ပြုတ်တယ်ပေါ့...။ပေါင်မုန့် ကြားထဲထဲ့ဖို့ အသားလေးကိုနွှင်၊ တချို့ 
တောက်တောက်စင်း၊ခရင်းနဲ့ ဖွ..နည်းပေါင်းများစွာ...ပြီးတော့ဆော့စ်လုပ်ပါတယ်..အဲလိုဘဲ ဆား ရှာလကာ ရည်ကစလို့ ငရုတ်သီး ဝိုင်သကြား..နောက်ထပ်အမျိုးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် ထပ်ထဲ့ကြို.. အဲဒါ ကျ
တော့အသားပေါ်ပြန်လောင်းနယ်ထားလိုက်တယ်၊ စားသုံးသူလာရင်ပေါင်မုန့် ကင် ပြီး အသားနဲ့ ဆော့စ်နယ် ထားတာအလယ်မှာထည့်ပေး အရွက်လေးကြက်သွန်ကွင်းလေး နဲနဲထဲ့ ..အိုး..နောက်ဟမ်ဘာဂါထဲမှာထဲ့
တတ်တဲ့ မရွှမ်းနစ်ပါထဲ့ပေးတတ်သေးတယ်။ ကဲ...အဲဒီဟမ်ဘာဂါကြီး ဘာအရသာမျိုးထွက် မလဲတော့ မသိ ဘူး..ကိုကိုGuy ကြီးတော့ အားပါးတရ ဝါးပြတာဘဲ..။ ကျမတော့ကြည့်တာဘဲကြိုက်တာ။စားတာတော့လိုက်
မစားချင်ပါဘူး။အမျိုးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ထဲ့ထားတာ ကိုယ်မကြိုက်တာပါနေလို့ ၊ ကျမကရှာလကာ
ဆိုင်တိုင်းနီးပါး ဒီလိုဟမ်ဘာကာတွေရတတ်တယ်။ ကျမကတခြားဟင်းတွေစိတ်ဝင်စားတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့အ ပတ်က ကြည့်တာ ဖရဲသီးနဲ့ baby arugula သုပ်တာလေ။ အရွှက်ကခါးသက်သက်လေးအရသာရှိတယ်။
ကျမကဒီအတိုင်းစားတတ်တယ် တခါတလေ အရွှက်ကြော်ချက်သဘောမျိုးလည်းချက်ပါတယ်။ သူ့ နည်းကို
ကြည့်ပြီးလိုက်သုပ်ကြည့်တာ အရမ်းကောင်းတယ် ချိုချိုခါးခါးလေး...နောက်တခါမှဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးပြမယ်။
ခုတော့စားလို့ ကုန်သွားပြီး..အဟီး..။ အဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်တာ တကယ်ကောင်းတယ်။ ဟင်းတွေကို
ဘယ်လိုအကွန့် တက်ပြီး ချက်စားရမလဲဆိုတာ နဲနဲနားလည်လာတယ်။ တချို့ ကလည်း ကိုးရီးယားတွေ ကင် ချီနဲ့ အနောက်နိုင်ငံက ဟင်းတွေပေါင်းစပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ထွင်ထားတာ...စားကောင်းမဲ့ပုံဘဲ..။စမ်းသပ်ပြီး ချက်လိုက်အုံးမယ်လေ...ကောင်းမှ အာလူးလာဖုတ်ပြီးဓါတ်ပုံလေးနဲ့ ကြွားလို့ ရမှာ..ခုတော့ ကြည့်ရှု စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်ဘဲဗျို့ ..... :P
ကျမဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီး လိုက်တုပထားတဲ့ နေ့ လည်စာ ငါးကင်နဲ့ သရက်သီးသုပ်(သရက်သီးကချဉ်လွန်းလို့ 
အားလုံးဘဲရွှင်လန်းချမ့် မြေ့ ကြပါစေရှင်~~~
Posted by မီးမီးငယ် at 9:52 AM 8 comments Links to this post
ကားတံခါးဆွဲပိတ်၊ခါးပတ်ကိုပတ်၊နေကာမျက်မှန်ပြောင်းတပ်(အဲဒီမျက်မှန်ကလည်း သူ့ အလုပ်ဆိုက်ထဲ
မှာသုံးတဲ့မျက်မှန်တွေထဲကတခုပေါ့)၊ရှေ့ ကမှန်လေးဖွင့် ကိုယ့်မျက်နှာအဆီပြန်နေလားပြန်ကြည့်၊ လက်
လေးနဲ့ ပြန်သပ်၊ အားလုံးဂွတ်..အိုကေ..ပြည့်စုံပြီ..သွားကြစို့ ကျားကျားရေ...မောင်းတော့ရှင့်..။
(သူကတော့ ကားမောင်းလိုင်စင်ပါမပါ၊လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေစစ်တာပေါ့..ဒါတော့ သူတို့ အလုပ်လေ ကျမတို့ ကတော့ကိုယ့်မျက်ခွက်လေး တကွက်ထဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တတ်တာတခုဘဲ.. သိတယ်..ဒါ
မိန်းမတွေရဲ့မဟာအလုပ်ရှင့်...)
မိုးလေးတဖွဲဖွဲနဲ့ ဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ငြိမ့်ညောင်းသံစဉ်သီချင်းတွေရှာဖွင့်..၊(ကျမတော့ 100.7 FM လိုင်း
နားထောင်လေ့ရှိတယ်။ သီချင်းလေး၂ပုဒ်လောက်ဖွင့်လိုက် ကြော်ငြာဝင်လိုက်သူတို့ တောင်ပြောမြောက်
ပြောတာ သေသေချာချာနားထောင်ပြီး လိုက်ရီမိတယ်...။ ဟာဟား..မယ်ငီးလိုဘဲ ဒင်းတို့လည်းအတော် အာချောင်တာဘဲ..နော်..အဟီး) တေးသွားလေးတွေလိုက်ဆို...တတ်တဲ့နေရာဆိုအကျယ်ကြီးလိုက်ဆိုပေါ့
မတတ်ရင် ဒါဒါ ဒီဒီ ဒိုဒို ပေါ့) မျက်လုံးတော့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ရူခင်းတွေမလွှတ်တမ်းကြည့်။ ပါးစပ်ကလည်း မနေပါဘူး တခါခါပြောမိပါတယ် အဲ..ဒီနားက အရင်ကဆို ခြောက်ကပ်နေတာဘဲ ခုတော့စည်ကားလာပြီ
ဟင်း..ကားတွေနှေးသွားကြပြီ..အော်..လမ်းပိတ်ထားတာကိုး..တနင်္ဂနွေအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကာထားပိတ် ထားတဲ့ဟာတွေ မဖယ်ပြစ်ကြဘူး..ဒီလူတွေနော်..တော်တော်ခက်တယ်...(နိုင်ငံခြားမှာ ကားလမ်းဆို အမြဲ
ပြင်နေတာဘဲ တို့ ဆီကလွဲလို့ နေမှာ ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်က လကမ္ဘာပေါ်သွားနေရသလို ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ 
"Don't know much" Linda Ronstadt & Aaron Neville သီချင်းလေး...ကောင်းလိုက်တာအေးအေး
လေးနဲ့ ...Look at this face I know the year are showing....Look at this life, I still
don't know where it's going,I don't know much.....ကွာ...ဒီ GPS ကလည်း တမှောင့် keep right
and stay on left lane...balah balah...နဲ့ ဒင်းအသံကြောင့် feel ငုပ်တယ်။ သီချင်းကောင်းနေပါတယ်
ဆိုနေမှ ကျားကျားရေ ဖြေးဖြေးနောက်က ကားလမ်းတောင်းနေတယ်..ပေးလိုက်.. တို့ တွေအလျင်
မလိုဘူး..ဟွန့်Sunday လည်းလာလုပ်ပေးရတယ်။ နဲနဲနောက်ကျလည်း ဘာဖြစ်လဲကွာ..ဈေးကိုင်ထား..
(NJ George Washington Bridge ကနေ NY Long island Westbury အထိသာမာန်အချိန်ဆိုရင်
ပုံမှန်ပေါ့ ၁နာရီသာသာလောက်ပါဘဲမောင်းရတာ..ကားလမ်းတွေအရမ်းပိတ်နေတဲ့တခါက ၃နာရီ အထိ ကြာဖူးတယ်လေ)
နေပြန်သာရင်ဓါတ်ပုံရိုက်ရအုံးမယ်..ကောင်းကင်ပြာပြာ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းနဲ့ လှလိုက်တာကျားကျားရေ...
And I'll see your true colors shining through I see your true colors I see your true colors
so don't be afraid to let them show your true colors are beautiful likearainbow
True color...သီချင်းဟောင်းလေးပါ..ပြန်ဆိုတဲ့သူတွေများလွန်းလို့ ဘယ်သူ့ မူရင်းမှန်းတောင်မသိတော့
ဘူး..ကိုယ်တော့ မိန်းခလေးအသံနဲ့ ပိုကြိုက်တယ်..။ကြိုက်ရင်တော့စာသားကိုလိုက်အော်ဖို့ နဲနဲတော့
တတ်တယ်...အဟဲ...I see you true color... တတ်သလောက်အော်ပြီးဟဲလိုက်တယ်လေ...။
ကဲ..ကျားကျားရေ..Tollgate နားရောက်တော့မယ် တို့ ကcash လိုင်းဆိုတော့ အစွန်ဆုံးသာကပ်ထားနော်.။
ဒါနဲ့ရှင့် E pass ဘယ်တော့ ပြန်လုပ်မလဲ၊ ရော့..အင့်..ပိုက်ဆံပေးရင်းနဲ့ပြောလိုက်အုံး..ကျေးဇူးပြုရ်ျ receive ပေးပါလို့ ( တာဝန်နဲ့ ခရီးထွက်ရင် ကုမ္မဏီကို ပြန် claim လုပ်ရတယ်လေ၊ပိုက်ဆံအကြောင်းဆိုရင် မိန်းမကပိုစေ့စပ်သေချာပါတယ်နော့ ...^_^ ) ကဲ..ဂျော့ဝါရှင်တန်တံတားကို အောက်ကနေဘဲဖြတ်တယ်၊အပေါ်ကဆိုကုန်တင်ကားတွေနဲ့ ရှုပ်လို့ ။
အဝင်ဝပေါ့...။ပိတ်ရက်လည်းလူများတာပါဘဲ...။တံတားက ၂ထပ်လေ..အောက်ထပ်က ကားငယ်တွေ ဘဲသွားခွင့်ရှိတယ်။အပေါ်ထပ်ကျတော့ ကုန်တင်ကားတွေ ကားကြီးတွေနဲ့ ရူပ်တတ်တယ်။
တခါခါတော့ အူကြောင်ကြောင်စဉ်းစားမိပါတယ် ဒီလောက်ကားတွေအများကြီးနဲ့ အပေါ်ထပ်အောက်ထပ် အပြည့်ကားတွေရဲ့ အလေးချိန်ကို တံတားကြီးခံနိုင်ပါ့မလား...ကျိုးကျသွားမလားလို့ ပါ.... @_@
ဟာ...GPS က massage လာတယ်..။ခုသွားနေတဲ့လမ်းက ၂ဝမိနစ်နောက်ကျမယ်တဲ့။ ၁၂ မိနစ်ပိုမြန် တဲ့လမ်းကသွားမလားတဲ့။ မီးတော့ Yes နှိပ်လိုက်ပြီနော် ...၁၂ မိနစ်လည်းနည်းဘူး..(ဒီလိုလမ်းရွှေးပေး
တဲ့ setting က US မှာဘဲရသေးတာတဲ့) သူပြောတဲ့အတိုင်းသာနင်းပေတော့....ကျားကျားရေ့......
ဒီပုံတခါကပြောဖူးတယ်လေ...အပေါ်မှာ အိမ်အမြင့်ကြီးရှိတယ်လို့ ...အသည်းယားပါတယ်ဆို....
ဟော..ရှေ့ က ဟတ်ဆန်မြစ်ဆိုတာလေ...။ Day light oh-woah,oh-woah oh -woah............
we knew this day would come,we knew it all along...How did it,come so fast? ................
And when the daylight comes I'll have to go ..When the sun comes up I will leave...........
I hold you so close...အိုးဝိုးဝိုး..အိုး..ဝိုးဝိုး...ခေါင်းလည်းခါ ကိုယ်လည်းလှုပ် အိုး...မိုက်စ်....တေးသွားနဲ့ 
လိုက်ပြီးကရင်းလည်းဟင်းချက်တတ်တဲ့ မယ်ငီး ကားထဲမှာတော့အပျော့ပေါ့...နော့်...... :)
ဟော..နေပြန်သာပြီ...ဒီ GWB တံတားကနေ Long island ကိုလာရင် ဒီ Bronx ဆိုတဲ့နေရာ ကနေဖြတ် ရတာမကြိုက်ဆုံးဘဲ..အမည်းလူကြီးတွေ လူကထွားထွားကားကကြီးကြီး နဲ့ ကြမ်းတမ်းသလိုဘဲ...။
သူတို့ ကိုလည်းစေ့စေ့မကြည့်ရဲူဘူး ကြောက်လို့ ...
အဲ...သူတို့ လူမျိုးတွေကို အရင်က နီ.. လို့ ခေါ်တာလေ..အဲလိုအခေါ်ကောင်းလို့ကြည့်နေကြ Food net work က Paula Deen တောင်ပြုတ်သွားပါကောလား ဒီတော့ မယ်မီးလည်း သူတို့ နံမည်ကိုအပြည့်မရေးရဲ
ဘူး..သူတို့ နယ်မြေမှာနေတော့ သူတို့ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်လေ..အဟီး...
တွေ့ တယ်ဟုတ်..တံတားအဝင်ကိုလုပြီးဝင်နေရတယ်။သူ့ တို့ ကားအကြီးတွေကိုမယှဉ်နိုင်တော့ နေရာ
ဖယ်ပေးရတယ် ဒီနားမှာတံတားကျော်တာနဲ့Yankee stadium ရှိတယ်လေ သူတို့ ပွဲသာရှိရင် ဒီမှာဘဲ....
နာရီနဲ့ ချီ ရွှာပတ်နေပြီ။
Throgs Neck တံတားကျော်ရင် ကားလမ်းနဘေးက ကမ်းခြေတလျောက်မှာ အားကစား လုပ်နေကြ
ပြေးနေကြ ရွှက်လှေတွေတိုက်နေကြတာ ပျော်စရာကြီးဘဲ..။ပိတ်ရက်ဆိုစက်ဘီးစီးကြတာပိုများတယ်။
ရှင့်မလဲ..အားရက်တောင်မရှိဘူး...ပိတ်ရက်လည်း..လုပ်နေရတာဘဲ..Holland က Oostverne ရွှာလေး ကိုသတိရတယ်..နေ့ တိုင်းကမ်းခြေမှာလမ်းလျောက်နိုင်တယ်...။ မြို့ ကြီးရောက်တော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်။
sailing အိုး....rod stewart ရဲ့ ကွဲအက်ရှတသံလေး.... ဒီနေရာ ဒီအချိန်မှလားကွာ....
we are sailing cross the sea...oh lord to near you to be free.......
ကျားကျားရေ...ရှင်တို့ ကော..မြန်မာပြည်မှာနေတုံးက အားရင်ဘာလုပ်လဲ...(စပ်စုကြည့်တာ)...
ကိုယ်လား..အားရင် ပိုကာဒေါင်းတယ်...(တိန်..ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေ..^_^ )
ဟိုမှာကြည့်စမ်း..ကောင်မလေးတယောက်အားနဲ့ မာန် နဲ့ ပြေးနေလိုက်တာ သူ့ အသားစိုင်ကြီးတွေတုန်
နေတာဘဲ..တအားဝတာကိုး...တော်တော်မောနေတဲ့ပုံ..ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ တပတ်၎ ရက်ပြေးနေတာ ကျုပ်ဗိုက်ပူ
ကြီး ပိန်နိုင်ပါ့မလား ဟိုကောင်မလေးလို တနေ့ ကျရင်တုန် ရွှဲလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဘဲ။ကမန်းကတန်းဘဲ လာနေတဲ့ သီချင်းလိုက်ဆိုမိတယ်...ဂါဂါ..သီချင်း..
born this way... my mama told me when I was young we are all born superstar.....
don't hide yourself in regret,just love yourself and your set....
Born this way....born this way.......
ရှင်ကလည်း လမ်းကြောင်းကို ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းမလုပ်နဲ့ လေ ဒီလမ်းဆိုဒီလမ်းပေါ့ ရှေ့ ကျကွေ့ ရမှာကြီးကို
တခါကမမှတ်သေးဘူးလား..JFK လေယာဉ်ကွင်းနားမှာ အမည်းမလေးတယောက်ရဲ့ အသစ်စက်စက်မာစီး
ဒီးကို နောက်ကနေပန်းတက်မလို့ ကွေ့ ဝင်ရင်း ဆောင့်မိတာလေ...။(အမည်းတွေများချစ်စရာကောင်းပုံက
စကားပြောရင် ဖ အစချီပြီး နဲ့ f#&* what thef*# u doing youf#* with my car shit f&# f#%f#!...
အံမယ်နောက်ဆုံးကျတော့ ၃ ခွန်းဆက်တိုက်ဗျား ဖ ဖ ဖ..ဟဟ) သူလည်းဂျာမာန်ကား ကိုယ်တို့ လည်း
ဂျာမာန်ကား တော်သေးတယ် သူ့ ကားဘာမှမဖြစ်ဘူး ဂျပန်ကားဆို အဲနေရာမှာဘဲ ကိုယ်တို့ လည်း ကားက နဲနေမှာ..ကိုယ်တို့ နံပါတ်ပြားလေးနဲနဲပိန်သွားတယ်..ဒါဘဲ) အဲဒါကို သူ့ ခေါင်းဆတ်ကနဲ တုန်သွားအချိန်မှာ နာသွားလို့ တရားစွဲမလို့ လုပ်တာတဲ့..ကားအာမခံကုမ္မဏီကပြောပြတယ်..ဟင်းဟင်း..အမေရိကား တရားစွဲ နံပါတ် ၁...ခုတောင်အချုပ်ထဲမှာ ကောင်လေးတယောက်၅ ရက်ချုပ်ခံထားရပြီး ဘာမှလာမလုပ်ဘူး သက် ဆိုင်သူတွေမေ့နေတာလေ..အစာလည်းမစားရဘူး..ပြန်တရားစွဲတာ ဒေါ်လာ ၄သန်းကျော်ရချင်တာတဲ့...
@-@...ကျားကျားရေ နောက်ပိုင်း longisland ကားလမ်းတအားကြပ်လာတယ် သတိထားမောင်း....ဟင်း...
တလမ်းလုံးကိုယ်ဘဲသတိပေးနေရတယ်...ဘယ်ကွေ့ ညာကွေ့ဟို exit ထွက် ဒီလမ်းမှာနေ..ဟူး.မောထှာ
ကဲရောက်တော့မယ်..(အလွန်ချိုသာသောလေသံ ချက်ချင်းပြောင်း သွားတယ်) မောလိုက်တာကွာ...... တလမ်းလုံး ကို မောင်းပေမဲ့ မီးက နဘေးကနေလိုက်ထိန်းပေးနေရတာ ခုလိုဘေးမသီရန်မခ ရောက်လာပြီ
အလုပ်အေးအေးဆေးဆေးလုပ်နော် အလုပ်မှာလိုက်ပြီး စောင့်မနေတော့ဘူး Broadway Mall မှာဘဲ ချထား
ပေးခဲ့ ရေလေးဘာလေးသောက် ခြေဆန့် လက်ဆန့် လုပ်လိုက်အုံးမယ် ဘယ်လောက်ကြာကြာရတယ်..
တကယ်ပါ တခါတလေလောက် ကျမလို ပါးစပ်လေးနဲ့ ကားမောင်းကြည့်ပါလား..တကယ်ပင်ပန်းတာနော့်
စိတ်မအား လူမအား ပါးစပ်မအား မျက်စိမအား တကယ်လုံးဝနားချိန်တောင်မရှိလိုက်ဘူး nonstop......
born this way...born this way.... :P
Posted by မီးမီးငယ် at 9:16 AM6comments Links to this post
Labels: US-Longisland, ခရီးသွားအတွေ့ အကြုံ